Oppo waxay ku dhawaaqeysaa taxanaha Reno iyo taleefankeeda cusub ee Abriil | Androidsis
Dhowr saacadood ka hor, Madaxweyne ku xigeenka Oppo Brian Shen ayaa ku dhawaaqay a taxane cusub oo telefoonada Oppo ah, waxaana loogu yeeraa 'Reno'. Astaantan qoyskan soosocda ayaa sidoo kale la muujiyay, taas oo adeegsanaysa midabyo dhalaalaya, iyada oo si maldahan u sheegaysa in loola dan leeyahay dhagaystayaal da ’yar.
Intaa waxaa sii dheer, shirkadda casriga ee fadhigeedu yahay Shiinaha ayaa sidoo kale soo bandhigtay taas casriga ugu horeeya ee taxanahan wuxuu noqon doonaa Oppo Reno. Faahfaahin dheeraad ah hoos.
Fulinta, ayaa ku dhawaaqay ku dhawaaqistiisa, taas terminaalka waxqabadka sare waxaa laga bilaabi doonaa 10ka Abriil gudaha Shiinaha. Ma jiro macluumaad dheeraad ah oo la xidhiidha casriyeynta casriga ah ee la heli karo illaa hadda, laakiin waxay noqon kartaa moobaylka la socda tiknoolajiyada dhajinta indhaha ee 10X, ka dibna shirkadda ayaa la filayaa inay bilawdo terminaal cusub oo cusub bisha soo socota.
Ogeysiiska taxanaha Reno
Markii hore, shirkadda ayaa shaaca ka qaaday in taleefanka casriga ah ee la soo bandhigi doono bisha Abriil ay ku shaqeyn doonto processor-kii ugu dambeeyay uguna awoodda badnaa ee Qualcomm weli: the Snapdragon 855 sideed-core 7nm.
Dhinaca kale, Shen Yiren ayaa isna xaqiijiyay taas qalabka waxaa ku shaqeynaya awood dhan 4,065 mah Mah. In kasta oo aadan sheegin wax ku saabsan taageerada lacag-bixinta degdegga ah, waxaan fileynaa in taleefannada casriga ahi ay leeyihiin tiknoolajiyad awood leh oo degdeg ah oo shirkaddu leedahay.
Shirkadda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay yeelan doonto in ka badan hal milyan oo cutub oo kaydka u ah dhammaadka soo socda ee bilowga ah. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu intaas ku daray inuu isku dayi doono inuu kusii hayo aaladda taleefanka gacanta 3,5mm, oo ah wax inta badan isticmaaleyaasha ay weli u janjeeraan. Si kastaba ha noqotee, weli waa la arki doonaa haddii qalabku uu sii hayn doono qeexitaankan farsamo, oo aan la hubin oo dad badan u daayo inuu sugo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Oppo Reno, oo ah taleefanka casriga ee soo socda oo leh Snapdragon 855 oo si rasmi ah loogu dhawaaqay bisha Abriil